I-Shorewater Loft, i-Qualicum Beach - I-Airbnb
I-Shorewater Loft, i-Qualicum Beach
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguArran
I-Shorewater Loft yindawo yakho yokubaleka ukusuka kwimihla ngemihla ukuya kwizandi zokuphumla zamaza abethayo emnyango wakho. Ngolwandle lwabucala olusuka kwibalcony yakho, ungayonwabela ubuhle beQualicum Beach ekufuneka ibonelele, kude nezihlwele kwikona yakho encinci yeVancouver Island iparadesi.
I-loft inebhedi enkulu yokumkanikazi kwigumbi eliphezulu elikumgangatho ophezulu, kwaye enye ikhupha ibhedi kumgangatho ophambili ovula ibhedi ephindwe kabini, ilungele isibini esinye okanye ezibini, okanye usapho ukwabelana.
Ikhitshi imiselwe ngokupheleleyo ukuba wenze isidlo sakho sangokuhlwa ngeentlanzi ezisanda kubanjiswa edolophini, ngelixa ujonge iimbono zolwandle ngokunjalo.
Ikhebula ibandakanyiwe, kunye ne-wifi eneNetflix kunye neNkulumbuso ekhoyo ukuba uyonwabele ngokuhlwa, ukuzipholela esofeni kunye nomlilo oqhubekayo.
Nokuba iyintoni na incasa yakho, ukusuka ukonwabela iglasi yewayini kwipatio enelanga, ukukhwela uhambo, idiphu yomlambo, iimarike zamafama, okanye usuku kwi-spa, iQualicum Beach ayisayi kudanisa. Idolophu yethu entle encinci yeyakho oza kuyifumana, kwaye yeyakho ukuthandana nayo. Uluhlu lwezinto ezikhangayo zasekhaya, indawo yokutyela kunye nemisebenzi iyafumaneka xa ufika.
Umbuki zindwendwe ngu- Arran
Siyafumaneka ngefowuni kunye ne-imeyile ukukunceda ngayo nayiphi na imibuzo onokuba nayo malunga nokuhlala kwakho, kwaye siyavuya ukucebisa ukutya kwasekhaya kunye nezinto ozithandayo zokuzama ngelixa ulapha.